Valentine’s Day မှာမက်မွန်သီး ချိုချိုလေးလို ပြင်ဆင်ကြမယ် -
Valentine’s Day မှာမက်မွန်သီး ချိုချိုလေးလို ပြင်ဆင်ကြမယ်
Posted on February 11, 2019 Author Hnin Ei Oo	Comment(0)
ချိုချိုမွှေးမွှေးမက်မွန်သီးလေးမို့ ကိုကိုမောင်မောင်တွေ အချစ်ပိုသွားအောင်…
ပြင်တဲ့ဆင်တဲ့အကြောင်း မသွားခင် နှင်းကဘာလို့ မက်မွန်သီး (Peach) အရောင်ကိုရွေးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကို အရင်သွားကြည့်ကြမယ်နော်။ မိတ်ကပ်ပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာချက်အရ ၂၀၁၉ အတွက် မိတ်ကပ်လောကမှာ အကြီးဆုံးနေရာယူမယ့်အရောင်က မက်မွန်သီးရောင်လို့ အများကခေါ်ကြတဲ့ ပန်းဖောက်လိမ္မော်ရောင်လေးက အရမ်းကိုခေတ်စားလာမှာပါတဲ့။ ဆိုတော့ကား နှင်းရဲ့ယောင်းယောင်းလေးတွေ Up to date ပြင်ဆင်လို့ရအောင် ဒီမက်မွန်သီး Look လေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါတယ်လို့။ ချိုအေးမွှေးမက်မွန်သီးလေးမို့ ကိုကိုမောင်မောင်တွေ အချစ်ပိုသွားအောင် ခုပဲစပြင်လိုက်ကြရအောင်…
ပြင်တဲ့ဆင်တဲ့အဆင့်ကိုမသွားခင် အရင်ဆုံးလိုအပ်တဲ့ မိတ်ကပ်ပစ္စည်းလေးတွေကို ပြောပြမယ်နော်။
မိတ်ကပ်အောက်ခံ (Makeup Primer)
SPF 50 PA +++ ပါဝင်တဲ့မိတ်ကပ်အရည် (Sunscreen သက်သက်ထပ်လိမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ SPF ကို သိပ်ကြည့်စရာမလိုပါဘူး။ မလိမ်းရင်တော့ နေပူထဲထွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် မဖြစ်မနေ လိမ်းပေးရပါမယ်။)
မိတ်ကပ်အခဲ (2 way cake)
မျက်ခုံးဆွဲတဲ့ ပေါင်ဒါ (Eyebrow powder cake)
ပန်းဖျော့ရောင်ကိုမှ ပုလဲမှုန်နည်းနည်းပါတဲ့ ပါးနီ (Shimmer baby pink blush)
နှုတ်ခမ်းနီကို အသားရောင်ကိုမှ မက်မွန်သီးရောင်ဘက် နည်းနည်းသမ်းတာလေး
မျက်ခွံကတော့ ချိုမြိန်တဲ့မက်မွန်သီးလို့ ပြောထားတဲ့အတိုင်း လိမ္မော်ပန်းဖောက်အရောင်လေးတွေပါတဲ့ ရှဲဒိုးတစ်ချပ်လောက်ဆို အဆင်ပြေပါပြီနော်။
ပထမဦးဆုံး မျက်နှာသစ်ပြီး ပြန်ထွက်လာတာနဲ့ ကိုယ်လိမ်းနေကျ skincare အဆင့်ဆင့်ကိုလိမ်းပြီးတာနဲ့ မျက်နှာကို နှင်းဆီပေါင်းခံရည် (Rose water) (သို့) ရှားစောင်းလက်ပက်ပါတဲ့ Mist လေးဖြန်းပြီး မျက်နှာထဲစိမ့်ဝင်အောင် ပုတ်ပေးပါ။ (ခါတိုင်းထက်မျက်နှာလေး ပိုကြည်နေအောင်လို့လေ။)
ဖျန်းပြီးရင်တော့ မိတ်ကပ်အောက်ခံကို အရင်လိမ်းထားပြီး အင်္ကျီလဲလိုက်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိတ်ကပ်အောက်ခံရဲ့ သဘာဝသည် အနည်းဆုံး ၃ မိနစ်ကနေ ၅ မိနစ်အထိထားမှ သူ့အာနိသင်က သေချာပြလို့ပါနော်။
အောက်ခံလိမ်းပြီးတာနဲ့ မိတ်ကပ်အရည်ကို စလိမ်းပြီး အပေါ်မှာ ပေါင်ဒါလေးပုတ်လိုက်ပါ။
ပေါင်ဒါအပေါ်မှာမှ ပါးနီလေးကိုထပ်ပြီး ဘလင်းဘလင်းဖြစ်သွားအောင် ပါးရိုးမှာဟိုင်းလိုက်လေးပါ နည်းနည်းတင်ပေးပေါ့။
Related Article >>> မျက်ရစ်မရှိတဲ့ယောင်းတွေအတွက် အလှဆုံး ရှဲဒိုးပုံစံ (၂) မျိုး
အကယ်၍ မျက်နှာမှာ အပြစ်အနာအဆာတွေ များနေတယ်ဆိုရင်တော့ ကွန်ဆီလာလေးနဲ့ အုပ်တဲ့အဆင့်ကို ထည့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် မျက်ခုံးကို အရမ်းထူထူကြီးမဟုတ်ဘဲ တစ်မျှင်ချင်းစီကို ပေါင်ဒါလေးနဲ့ ဖြည့်ပြီး လိုက်ခြယ်လိုက်နော်။
မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့အဆင့်ပြီးသွားရင်တော့ နှုတ်ခမ်းနီအခြောက် (Matte) ဆိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် နှုတ်ခမ်းပေါင်းဆေး (Lip balm) ကိုအရင်ဆိုးထားပါ။ ဒါပြီးရင်တော့ မျက်လုံးစခြယ်ပါမယ်နော်။
အရင်ဦးဆုံး မျက်လုံးပေါ်မှာရှိတဲ့ အသားအရောင်မညီတာတွေနဲ့ အပြစ်အနာအဆာတွေ ဖုံးသွားအောင် ကွန်ဆီလာလေးကို လက်ညှိုးထိပ်လေးနဲ့တို့ပြီး မျက်ခွံတစ်ခုလုံးပေါ်ဖြန့်လိုက်ပါ။
ပြီးတာနဲ့ ရှဲဒိုးအချပ်ထဲက ပန်းလိမ္မော်ရောင် ခပ်နုနုကိုယူပြီး မျက်ခွံတစ်ခုလုံးပေါ် ဖြန့်ထားလိုက်ပါ။
မျက်ခွံတစ်ဝက်လောက်ကို ခုနကထက်အရောင် နည်းနည်းပိုရင့်တဲ့အရောင်ယူပြီး သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ဖြန့်ချလိုက်ပါ။
Related Article >>> Valentine’s Day နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်မသိသေးတဲ့ အချက် (၁၄)ချက်
နောက်ဆုံးမှာတော့ မျက်ခွံရဲ့ အောက်ဘက်မှာ အညို (သို့) အနက်ရောင်ကို ခပ်ပါးပါးဆိုးပြီး အပေါ်အရောင်နဲ့ ရောသွားအောင် ဖြန့်လိုက်ရင်တော့ ယောင်းတို့လိုချင်တဲ့ မက်မွန်သီးရောင် မျက်ဝန်းလေးရပါပြီလို့။
အောက်မျက်ခွံကိုလည်း နည်းနည်းပါးပါးခြယ်ပြီး မျက်တောင်ကော့ဆေးလေး သုံးဖို့မမေ့နဲ့ဦးနော်။
မျက်နှာကို အပြည့်အစုံခြယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ နောက်ဆုံးပိတ် နှုတ်ခမ်းနီလေးကို ဆိုးလိုက်ပါ။ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေး ဖြစ်နေဖို့ဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံးနှုတ်ခမ်းကို ခဲတံလေးနဲ့အရင် ဘောင်ကွပ်လိုက်ပေါ့။
အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ မိတ်ကပ်သားတွေ မပျက်မကွက်၊ မရွေ့အောင် မိတ်ကပ်စပရေးလေးဖြန်းလိုက်ဦး။ ဒါဆိုရင်တော့ ဗယ်တိုင်းဒေးမှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ချိုမြမြ မက်မွန်သီးလေး ဖြစ်နေမှာပါလို့။
ခြိုခြိုမှေးမှေးမကျမှနျသီးလေးမို့ ကိုကိုမောငျမောငျတှေ အခဈြပိုသှားအောငျ…
ပွငျတဲ့ဆငျတဲ့အကွောငျး မသှားခငျ နှငျးကဘာလို့ မကျမှနျသီး (Peach) အရောငျကိုရှေးလဲဆိုတဲ့အကွောငျးကို အရငျသှားကွညျ့ကွမယျနျော။ မိတျကပျပညာရှငျတှရေဲ့ လလေ့ာခကျြအရ ၂၀၁၉ အတှကျ မိတျကပျလောကမှာ အကွီးဆုံးနရောယူမယျ့အရောငျက မကျမှနျသီးရောငျလို့ အမြားကချေါကွတဲ့ ပနျးဖောကျလိမ်မျောရောငျလေးက အရမျးကိုခတျေစားလာမှာပါတဲ့။ ဆိုတော့ကား နှငျးရဲ့ယောငျးယောငျးလေးတှေ Up to date ပွငျဆငျလို့ရအောငျ ဒီမကျမှနျသီး Look လေးကိုရှေးပေးလိုကျပါတယျလို့။ ခြိုအေးမှေးမကျမှနျသီးလေးမို့ ကိုကိုမောငျမောငျတှေ အခဈြပိုသှားအောငျ ခုပဲစပွငျလိုကျကွရအောငျ…
ပွငျတဲ့ဆငျတဲ့အဆငျ့ကိုမသှားခငျ အရငျဆုံးလိုအပျတဲ့ မိတျကပျပစ်စညျးလေးတှကေို ပွောပွမယျနျော။
မိတျကပျအောကျခံ (Makeup Primer)
SPF 50 PA +++ ပါဝငျတဲ့မိတျကပျအရညျ (Sunscreen သကျသကျထပျလိမျးမယျဆိုရငျတော့ SPF ကို သိပျကွညျ့စရာမလိုပါဘူး။ မလိမျးရငျတော့ နပေူထဲထှကျမှာဖွဈတဲ့အတှကျ မဖွဈမနေ လိမျးပေးရပါမယျ။)
မိတျကပျအခဲ (2 way cake)
မကျြခုံးဆှဲတဲ့ ပေါငျဒါ (Eyebrow powder cake)
ပနျးဖြော့ရောငျကိုမှ ပုလဲမှုနျနညျးနညျးပါတဲ့ ပါးနီ (Shimmer baby pink blush)
နှုတျခမျးနီကို အသားရောငျကိုမှ မကျမှနျသီးရောငျဘကျ နညျးနညျးသမျးတာလေး
မကျြခှံကတော့ ခြိုမွိနျတဲ့မကျမှနျသီးလို့ ပွောထားတဲ့အတိုငျး လိမ်မျောပနျးဖောကျအရောငျလေးတှပေါတဲ့ ရှဲဒိုးတဈခပျြလောကျဆို အဆငျပွပေါပွီနျော။
ပထမဦးဆုံး မကျြနှာသဈပွီး ပွနျထှကျလာတာနဲ့ ကိုယျလိမျးနကြေ skincare အဆငျ့ဆငျ့ကိုလိမျးပွီးတာနဲ့ မကျြနှာကို နှငျးဆီပေါငျးခံရညျ (Rose water) (သို့) ရှားစောငျးလကျပကျပါတဲ့ Mist လေးဖွနျးပွီး မကျြနှာထဲစိမျ့ဝငျအောငျ ပုတျပေးပါ။ (ခါတိုငျးထကျမကျြနှာလေး ပိုကွညျနအေောငျလို့လေ။)
ဖနျြးပွီးရငျတော့ မိတျကပျအောကျခံကို အရငျလိမျးထားပွီး အင်ျကြီလဲလိုကျပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိတျကပျအောကျခံရဲ့ သဘာဝသညျ အနညျးဆုံး ၃ မိနဈကနေ ၅ မိနဈအထိထားမှ သူ့အာနိသငျက သခြောပွလို့ပါနျော။
အောကျခံလိမျးပွီးတာနဲ့ မိတျကပျအရညျကို စလိမျးပွီး အပျေါမှာ ပေါငျဒါလေးပုတျလိုကျပါ။
ပေါငျဒါအပျေါမှာမှ ပါးနီလေးကိုထပျပွီး ဘလငျးဘလငျးဖွဈသှားအောငျ ပါးရိုးမှာဟိုငျးလိုကျလေးပါ နညျးနညျးတငျပေးပေါ့။
Related Article >>> မကျြရဈမရှိတဲ့ယောငျးတှအေတှကျ အလှဆုံး ရှဲဒိုးပုံစံ (၂) မြိုး
အကယျ၍ မကျြနှာမှာ အပွဈအနာအဆာတှေ မြားနတေယျဆိုရငျတော့ ကှနျဆီလာလေးနဲ့ အုပျတဲ့အဆငျ့ကို ထညျ့လိုကျပါ။
ပွီးရငျ မကျြခုံးကို အရမျးထူထူကွီးမဟုတျဘဲ တဈမြှငျခငျြးစီကို ပေါငျဒါလေးနဲ့ ဖွညျ့ပွီး လိုကျခွယျလိုကျနျော။
မိတျကပျလိမျးတဲ့အဆငျ့ပွီးသှားရငျတော့ နှုတျခမျးနီအခွောကျ (Matte) ဆိုးမှာဖွဈတဲ့အတှကျ နှုတျခမျးပေါငျးဆေး (Lip balm) ကိုအရငျဆိုးထားပါ။ ဒါပွီးရငျတော့ မကျြလုံးစခွယျပါမယျနျော။
အရငျဦးဆုံး မကျြလုံးပျေါမှာရှိတဲ့ အသားအရောငျမညီတာတှနေဲ့ အပွဈအနာအဆာတှေ ဖုံးသှားအောငျ ကှနျဆီလာလေးကို လကျညှိုးထိပျလေးနဲ့တို့ပွီး မကျြခှံတဈခုလုံးပျေါဖွနျ့လိုကျပါ။
ပွီးတာနဲ့ ရှဲဒိုးအခပျြထဲက ပနျးလိမ်မျောရောငျ ခပျနုနုကိုယူပွီး မကျြခှံတဈခုလုံးပျေါ ဖွနျ့ထားလိုကျပါ။
မကျြခှံတဈဝကျလောကျကို ခုနကထကျအရောငျ နညျးနညျးပိုရငျ့တဲ့အရောငျယူပွီး သုံးပုံနှဈပုံလောကျဖွနျ့ခလြိုကျပါ။
Related Article >>> Valentine’s Day နဲ့ ပတျသကျပွီး သငျမသိသေးတဲ့ အခကျြ (၁၄)ခကျြ
နောကျဆုံးမှာတော့ မကျြခှံရဲ့ အောကျဘကျမှာ အညို (သို့) အနကျရောငျကို ခပျပါးပါးဆိုးပွီး အပျေါအရောငျနဲ့ ရောသှားအောငျ ဖွနျ့လိုကျရငျတော့ ယောငျးတို့လိုခငျြတဲ့ မကျမှနျသီးရောငျ မကျြဝနျးလေးရပါပွီလို့။
အောကျမကျြခှံကိုလညျး နညျးနညျးပါးပါးခွယျပွီး မကျြတောငျကော့ဆေးလေး သုံးဖို့မမနေဲ့ဦးနျော။
မကျြနှာကို အပွညျ့အစုံခွယျပွီးသှားပွီဆိုရငျတော့ နောကျဆုံးပိတျ နှုတျခမျးနီလေးကို ဆိုးလိုကျပါ။ နှုတျခမျးဖူးဖူးလေး ဖွဈနဖေို့ဆိုရငျတော့ အရငျဆုံးနှုတျခမျးကို ခဲတံလေးနဲ့အရငျ ဘောငျကှပျလိုကျပေါ့။
အားလုံးပွီးသှားရငျတော့ မိတျကပျသားတှေ မပကျြမကှကျ၊ မရှအေ့ောငျ မိတျကပျစပရေးလေးဖွနျးလိုကျဦး။ ဒါဆိုရငျတော့ ဗယျတိုငျးဒေးမှာ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ခြိုမွမွ မကျမှနျသီးလေး ဖွဈနမှောပါလို့။
Tagged day, look, makeup, peachy, special, valentines
သင်္ကြန်အတွက် အလွယ်ဆုံး ရေစိုခံမိတ်ကပ်
Posted on March 19, 2017 Author Christina Rosy
ဟေ့ ပျိုမေတို့ရေ သင်္ကြန်မှာကဲဖို့စီစဉ်နေကြပြီလား။
ခြေသည်းလက်သည်းမှိုစွဲခြင်းကို အမြန်ဆုံးသက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်း (၄) ခု
Posted on November 22, 2017 Author Akari
တစ်ကိုယ်လုံး ပြောစရာမရှိအောင်လှနေပြီးကာမှ ခြေသည်းလက်သည်းတွေ မှိုစွဲနေတယ်ဆို ဘယ်အဆင်ပြေပါ့မလဲနော်..
ဗိုက်အဆီကျချင်တဲ့ ယောင်းတို့အတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ထိရောက်မှုလည်းရှိတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းများ
Posted on August 7, 2017 April 18, 2018 Author
ဗိုက်အဆီကျချင်တဲ့ ယောင်းတို့အတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ထိရောက်မှုလည်းရှိတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကို fitness blogger Erina Sizzle အယ် ရီ နာ/इरिना (https://www.facebook.com/ErinaSizzlefit/) နဲ့အတူ အက်ဒမင်တို့ ပူးပေါင်းတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင့်။
လိပ်ပြာစံအိမ်က တကယ်ပဲ ကြည့်ရတန်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားလား?
ပြန်ဆုံဖြစ်ခဲ့ရင်…. (အပိုင်း -၁၁)
သဘာဝတရားကို ဆန့်ကျင်နေတဲ့ ဖြစ်စဉ်နဲ့ လူတွေအကြောင်း စိတ်ဝင်စားစရာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်ရှင် (၂)ကား
Posted on April 24, 2019 Author Sugar Cane
အရောင်ဆန်းတွေကို ဆရာကျကျတွဲဖက်ဝတ်ဆင်နိုင်ဖို့ ဖက်ရှင်နည်းလမ်း (၅) သွယ်
Posted on April 24, 2019 April 24, 2019 Author Stella
ဒီတစ်ပတ်ပိတ်ရက်ကို အကျိုးရှိရှိကုန်ဆုံးစေနိုင်မယ့် ပွဲလေးတွေ
Posted on April 24, 2019 April 24, 2019 Author Yin Sandi Ko
အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲစားလို့ သွေးတိုးမှာကြောက်တဲ့ယောင်းတို့အတွက် နို့စိမ်းအစားထိုးချက်နည်း
ဖုန်းနံပါတ်: 09424409727, 09 973476115
ဆက်သွယ်ရန် အီးမေးလ်လိပ်စာ: nilar@forhermyanmar.com